– | भरतविमल यादव, स्वतन्त्र राजनीतिककर्मी
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सातदलीय गठबन्धनमा सक्रिय भएर लाग्नुभएका भरतविमल यादव राष्ट्रिय छवि बनाउन सफल भएका छन् । सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि उनको छुट्टै पहिचान छ । नेपाल सद्भावना पार्टी तर्फबाट सातदलीय गठबन्धनमा रहेर जनआन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेका यादव पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा जोडिएका थिए । तर, उपेन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि उनी बाहिरिएका हुन् । उनले मधेसको पक्षमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मधेसको राजनीतिकलाई नजिकबाट हेरिरहेका यादवसँग रातोपाटीको गेस्टरुममा एसके यादवले कुराकानी गरेका छन् ।
तपाईंको इसारा राजावादीतिर हो ?
–पक्कै पनि राजावादी नै हो । गणतन्त्र नरुचाउने, राजतन्त्र फर्काउने जुन गिरोह अहिले सक्रिय छन्, उनीहरूकै इसारामा यो आन्दोलन भइरहेको छ । संविधान निर्माणमा सहभागि भइएन त्यसैले पुनःलेखन हुनुपर्यो रे । यस्तो कही संसारमा हुन्छ । गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतन्त्र हो । जसले गणतन्त्रविरुद्ध कुरा गरेका छन्, जसले गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो पक्कै पनि लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन ।
त्यसो भए तपाईंको विचारमा यो आन्दोलन गणतन्त्रको विरोधमा भइरहेको छ ?
–निश्चित रूपमा हो । संघीय गठबन्धनका मुख्य पार्ट मधेसी मोर्चामा रहेका सात घटकमध्ये केही नेताजस्तो कि राजेन्द्र महतोहरूले संविधान पुनर्लेखन होइन, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ भने केही नेताले पुनर्लेखनलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुभएको छ । संविधान पुनर्लेखन भनेको आन्दोलन अल्झाउने बाटो हो भने कुरा मोर्चाका नेता पनि बुझेका छन् तर गठबन्धनले त्यसलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढिरहेको छ ।